Ngwaahịa ndị na - ebubata ya na ụlọ ọrụ ya - ndị na-emepụta ngwaahịa China
Ọcha (HPLC): 98.0% min
Pederede nha: <15um: 90min
Mbukota & nzipu:
UN No.2811, Klas: 6.1, Otu ngwugwu: III
Ọdịdị: Na-enweghị ntụ na-acha odo odo na-acha odo odo (Amụma KOH / g): 280-303 Mmiri: 0.3% max Pụrụ Iche na 25 / 15.6 oC: 0.800-0.820 Agba (Gardner): 2max Neutralization Equivalent (g / mol): 185-200 160kg / ígwè drum, 15Mt / ISO tank UN No.2922, Klas: 8, Mbukota ìgwè: III ☑ Ọ ga-eji dị ka solubilizing modifier na oké nsogbu antiwear gị n'ụlọnga nke na-abụghị mmanụ soluble antiwear gị n'ụlọnga n'ihi na ya magburu onwe mmanụ solubility ; ☑ Enwere ike iji ya dị ka mgbakwunye dị irè iji melite nchekwa s ...
Ọdịdị ìhè odo mmiri mmiri Ọcha (GC) 99.0% min Mmiri 0.2% ma ☑ Ọ na-eji gafee ụlọ ọrụ, agrochemical Active ingriedient synthesis, dyes and pharmaceuticals. FMgbe mmeghachi omume N-alkylation dị n'etiti o-ethylaniline na 2-bromopropane, enwere ike nweta chlorfenapyr. Nke a bu mbu ahihia ahihia ahihia ahihia nke nwere ezigbo uto na ahihia ahihia na ahihia ahihia. ☑O-Ethylaniline bụkwa akụrụngwa nke methamchlor na ethyl methamidine nke na-egbu ahụhụ. The N'ime dai ...
25kg / drum, 8mt / FCL UN No.2811, Klas: 6.1, ingtù nchịkọta: III ☑ 2,6-dihydroxytoluene bụ ọcha ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọcha crystalline ntụ ntụ, nke dị mfe igbari na mmiri ma nwee ike acidity. Ọ nwere ike ịmepụta ether, ester, ketone na ihe ndị ọzọ site na mmeghachi omume kemịkal. N'ihi 2, 6-dihydroxytoluene nwere ọtụtụ ihe dị mkpa nke anụ ahụ na nke kemịkal, ya mere ọ nwere ngwa dị ezigbo mkpa na ụlọ ọrụ kemịkal. Ngwa ngwa ya gụnyere resin sịntetik, dyeing, ọgwụ, pesticide ...
Amụma, C10-C14-tert-alkyl, CAS 3003-25-2, (R) -3-Aminobutanol, CAS 453-18-9, 2-Methyl resorcinol, CAS 608-25-3,